အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန် ( ၅ ) မျိုး - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingအာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန် ( ၅ ) မျိုး
October 8, 2021 Yan Amazing, Knowledge 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန်တွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အာကာသထဲကို ဘယ်အကောင်လေးတွေက ပထမဆုံး ရောက်ခဲ့ကြလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ မျောက်နဲ့ မျောက်ဝံများ
မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရ အာကာသ ယာဉ်ထဲ လိုက်ပါခဲ့တဲ့ မျောက် နဲ့ မျောက်ဝံ အကောင်ရေပေါင်းဟာ ( ၃၂ ) ကောင် အထိ ရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီအထဲမှာ မျောက်စပ် ၊ မျောက်ပုတီး ၊ မျောက်တံငါ ၊ ရှဉ့်အမြှီး မျောက် နဲ့ ချင်ပန်ဇီ တို့လည်း မျောက်မျိုးစိတ်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ် ။ အာကာသထဲ ကို ပထမဦးဆုံး ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ မျောက်လေး ကတော့ Albert II လို့ ခေါ်တဲ့ မျောက်လေး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Albert II ဟာ ( ၁၉၄၉ ) ခုနှစ်တုန်းက လေထု အမြင့် ( ၁၃၄ ) ကီလိုမီတာ အထိ ရောက်ခဲ့သော်လည်း မြေပြင်ပေါ်ကို လေထီးနဲ့ ပြန်ဆင်းတဲ့အခါ လေထီးက ပွင့်မသွားခဲ့တာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ ခွေး
ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ခေတ်တုန်းက ခွေးလေးတွေကို အာကာသထဲ စေလွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ အထင်ရှားဆုံးကတော့ ( ၁၉၅၇ ) ခုနှစ်တုန်းက လိုင်ကာ လို့ အမည်ရတဲ့ ခွေး မလေး တစ်ကောင်ကို အာကာသထဲ ပို့ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လိုင်ကာ ကို မော်စကို မြို့က လမ်းမပေါ်က တွေ့ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူမ ရဲ့ ယဉ်ပါးမှုကြောင့် အာကာသ ထဲ စေလွှတ်မယ့် မစ်ရှစ်ထဲကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ ။ ထိုခေတ်တုန်းက ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ဟာ လိုင်ကာ မတိုင်ခင် တစ်ခြား ခွေးလေးတွေကို အာကာသထဲ စေလွှတ်ခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
လိုင်ကာ ကတော့ အာကာသထဲကို အောင်မြင်စွာ ရောက်ရှိသွားတဲ့ ပထမဦးဆုံး ခွေးလေး အဖြစ် မှတ်တမ်း ဝင်သွားခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းများအရ ဆိုဗီယက် အစိုးရဟာ လိုင်ကာ အတွက် အစာတစ်နပ် နဲ့ အောက်စီဂျင် ခုနှစ်ရက်စာ သာပေးပြီး လွှတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အစိုးရ က ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းမှာတော့ လိုင်ကာ ဟာ အောက်စီဂျင်ရနေတဲ့ ( ၇ ) ရက်အထိ အသက်ရှင်သွားခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့် အဖြစ်မှန်ကတော့ လိုင်ကာ ဟာ အာကာသ ယာဉ် ပျံသန်းနေစဉ် ( ၅ ) နာရီ အကြာမှာ အပူလွန်ကဲပြီး အသက်မရှင်ခဲ့ပါဘူး ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ လိပ်
( ၁၉၆၈ ) ခုနှစ် ကာလ ဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံ နဲ့ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု အကြား လပေါ်ကို လူ ပို့ဆောင်နိုင်ရန် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ ကာလတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို အချိန်တွေတုန်းက ရုရှား သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ Zond5လို့ ခေါ်တဲ့ အာကာသယာဉ်ထဲမှာ မျိုးစေ့ နမူနာ အချို့တွေ ၊ ပိုးကောင် တွေ နဲ့ ကုန်းလိပ် ( ၂ ) ကောင်ကို ထည့်သွင်းပြီး အာကာသထဲ စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
Zond5အာကာသ ယာဉ်ဟာ လပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ( ၆ ) ရက်ကြာအောင် လှည့်ပတ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို ပြန်လည် ဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ် ။ မူလ အစီစဉ်က ကာဇက်စတန် နိုင်ငံထဲကို ဆင်းသက်ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် နည်းပညာ ချို့ယွင်းမှုတွေကြောင့် လမ်းကြောင်းလွဲသွားပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းစွာပဲ အာကာသယာဉ်နဲ့ ပါသွားခဲ့တဲ့ ကုန်းလိပ် ( ၂ ) ကောင်ဟာ အလေးချိန် ( ၁၀ ) ရာခိုင်နှုန်း အထိ ကျ သွားပေမယ့်လည်း အသက်ရှင်စွာ နဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ် ပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ ရေဝက်ဝံ
( ၂၀၀၇ ) ခုနှစ်တုန်းက လေ့လာခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေအရ tardigrades လို့ခေါ်တဲ့ ရေဝက်ဝံတွေဟာ အာကာသ ရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ အသက်ရှင်နိုင်တဲ့ အကောင်တွေ အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပါတယ် ။ ရေဝက်ဝံလို့ခေါ်တဲ့ အကောင်လေးတွေဟာ အရွယ်အစားအတော်လေးကို သေးငယ်တဲ့ ကျောရိုးမဲ့ အကောင်လေးတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ ကြည့်မှပဲ မြင်ရမှာပါ ။ ဒါ့အပြင် ရေဝက်ဝံတွေဟာ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်တာ ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်တာ ၊ အေးခဲတာ နဲ့ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်တဲ့ ဒဏ်တွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိကြပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အာကာသထဲကို ရေဝက်ဝံတွေ ထည့်ပြီး စေလွှတ်ခဲ့တုန်းကဆိုရင်လည်း မပို့ဆောင်ခင် သူတို့ကို အခြောက်ခံထားပြီးမှ အာကာသထဲကို ( ၁၀ ) ရက်ကြာ စေလွှတ်ခဲ့တာပါ ။ ဒီအကောင်လေးတွေကို ကမ္ဘာပေါ် ပြန်ရောက်လာပြီး စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ လိုက်ပါသွားခဲ့တဲ့ ရေဝက်ဝံတွေထဲမှာမှ ( ၆၈ ) ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသက်ရှင်နေသေးပြီး အေးခဲတဲ့ ဒဏ်နဲ့ အာကာသ ဓာတ်ရောင်ခြည် သင့်တဲ့ ဒဏ်တွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည် ရှိနေတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ ပင့်ကူ
( ၁၉၆၉ ) ခုနှစ်မှာတော့ လ ပေါ်ကို လူသားတွေ အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မစ်ရှစ် အပြီးမှာတော့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အာကာသထဲ စေလွှတ်တာ အတော်လေး နည်းပါးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါ ပေမယ့်လည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အာကာသထဲက ဆွဲငင်အားမဲ့တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုက တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဇီ၀ဗေဒ လုပ်ဆောင်ချက်အပေါ် ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိနိုက်မလဲဆိုတာ လေ့လာချင်ခဲ့ကြပါသေးတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ( ၁၉၇၃ ) ခုနှစ်မှာတော့ Anita နဲ့ Arabella အမည်ရှိ ပင့်ကူ ( ၂ ) ကောင်ကို အာကာသထဲ စေလွှတ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒီ ပင့်ကူ ( ၂ ) ကောင်ကို ပို့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဆွဲငင်အား မဲ့နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ပင့်ကူအိမ်ကို ဆောက်နိုင်သေးလားဆိုတာ သိချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ကယ်တမ်းမှာလည်း ထို ပင့်ကူတွေဟာ အာကာသထဲမှာ ပင့်ကူ အိမ် တွေ ဆောက်နိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာမြေမှာ ဆောက်တာထက်တော့ အနည်းငယ် သေးသွားပါတယ်တဲ့ ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ အာကာသထဲကို ပထမဆုံး အနေနဲ့ ရောက်ဖူးခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က တိရိစ္ဆာန် တွေထဲက အချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com